Ii-AirPods ziya kudityaniswa ngokuzenzekelayo ne-Apple TV kunye nokufika kwe-tvOS 11 | Ndisuka mac
Ii-AirPods ziya kudityaniswa ngokuzenzekelayo ne-Apple TV kunye nokufika kwe-tvOS 11
Enye yezinto endiyithandayo kakhulu malunga nenkqubo yokusebenza kukukwazi ukwenza izinto ezinzima zilula. Kuyinyani ukuba ukuthenga ixesha phakathi kwemisebenzi kukulandelelana kosuku. Ukongeza ekwenzeni izinto ezinzima kube lula, ikwi-DNA ye-Apple. Kodwa ayisiyiyo yonke into egqibeleleyo. Xa ii-AirPod zifikelela kwintengiso, enye yeempawu ezithandwe kakhulu ngabasebenzisi yayilunxibelelwano oluzenzekelayo xa umthombo wesandi wawukwi-iPhone, iMac okanye iApple Watch. Inketho ekhethwe yinkampani kungqamaniso neakhawunti ye-iCloud kwaye kufuneka sitsho ukuba iziphumo zigqibelele.
Kodwa vumelanisa ngokuzenzekelayo kwi-Apple TV, ayikafumaneki okwangoku. Abasebenzisi abaninzi basebenzisa umxholo weApple TV ngee-headphone ukubukela uthotho lwabo abaluthandayo okanye nje ngokuba ngumdlali weApple Music kwaye bafuna ukuba unxibelelwano luzenzekelayo. Ewe, sinethamsanqa, kuba ukhetho Ukuvumelanisa ngokuzenzekelayo kuya kufumaneka kwi-tvOS 11, eya kufumaneka ukuqala kokwindla.
Kude kube ngoku, abasebenzisi xa bethatha isigqibo sokudibanisa nasiphi na isixhobo esingenazingcingo ngeBluetooth benze umsebenzi ofanayo, nokuba zii-AirPods okanye nasiphi na iseti yentloko engenazingcingo okanye isithethi. Inkqubo yile ilandelayo:
Kuya kufuneka ubeke ii-AirPods zakho kwimowudi yokubhangqa okanye ubonakale kwezinye izixhobo.
Layita i-Apple TV, ukuba awukenzi njalo, kwaye kwiscreen sasekhaya yiya "kuseto".
Cofa kwi "Controls and Devices".
Jonga ukhetho lwe "bluetooth".
Xa i-Apple TV ifumana ii-headphone, ukhetha zona
Izinto esizicelayo kubaphuhlisi beTVOS kukuba iyimveliso yabasebenzisi abaninzi, evumela ukufaka ngaphezulu kweakhawunti enye ye-iCloud Ukuze usapho lonke lusebenzise ii-AirPods zalo, kwaye kwangaxeshanye. Ukongeza, oku kuya kunika umtsi obalulekileyo kumgangatho ophambili weApple ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ii-AirPods ziya kudityaniswa ngokuzenzekelayo ne-Apple TV kunye nokufika kwe-tvOS 11
Kwaye ekugqibeleni i-12-intshi iMacBook 2017 ikwizandla ze-iFixit
U-Apple uyaqhubeka nokuthengisa imemori kunye neprosesa kwiMacBook Pro 2017